Ihe omuma: SEO, ihe niile ị ga-achọ ịma
SEO bụ ọrụ ndị ahịa na saịtị na-eme iji hụ na ebe nrụọrụ weebụ ha dị elu na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ, ma ọ bụ na ha na-eme ka ọhụhụ ha dị na nyocha ọchụchọ. Okpokọta ga-eji okwu okwu na ahịrịokwu ndị dị mkpa na ọdịnaya. Ryan Johnson, Onye isi ahịa ahịa nke Semalt , kwuru na ụbọchị ịghọ aghụghọ ule search engine algọridim iji nweta ihu na njirimara ọchụchọ gafeela. Na ahịa ndị dị ugbu a, ọ dị mkpa ka ndị nwe ụlọ nwere ike iji usoro ọdịnaya yana ụzọ SEO ndị ọzọ na-ebuli nke ọma, ma ghara iji njikọ ma ọ bụ usoro.
Isiokwu na-esonụ na-achikota isi ihe dị iche iche nke SEO bụ nke ga-emetụta ọrụ.
Ịntanetị ahụwo ihe dị mkpa na ahịa ọdịnaya - qualitaet von software. Ọganihu Google na-eme n'oge na-adịbeghị anya kpatara site na njem nke Google iji chọpụta ọdịnaya dị ala. Ọchịchị ga-achịkwa ọtụtụ. Otu ụzọ ị ga-esi ghọta nke a bụ na SEO na-ekwu ihe ndị ahịa chọrọ, na ịzụ ahịa ahịa ọdịnaya iji mezuo otu. Echiche abụọ ahụ dabere na ibe ha. SEO choro ọdịnaya, ma o nweghị SEO n'enweghị ọdịnaya. Ịchọpụta ọdịnaya pụtara na mmadụ kwesịrị inwe mkparịta ụka dị irè ndị e tinyere na ha, ma jiri ya mee ihe n'ụzọ ọ bụla n'ime okwu.
Nzube bụ isi maka Google dịka nyocha ọchụchọ bụ ịnye ahụmịhe kachasị mma maka ndị ọrụ ha. Ha abụghị Fans nke ọdịnaya dị ala, otu aka ahụ maka saịtị ahụ. Ngwa, n'ihi ọtụtụ ndị ọrụ, ọ bụ ogo zuru oke. Onye ọrụ ntanetị na-akọwapụta ebe nrụọrụ weebụ dị ka ala-ogo ma ọ bụrụ na ọ na-ewe ogologo oge iji kwụọ. Ihe si na ya pụta bụ na ọ na-emetụta ogo ọchụchọ. Nbudata na peeji nke na-ebu nwayọ apụtaghị n'elu na nchọta ọchụchọ. Ịgbagharị ngwa ngwa na-eme ka ahụmahụ ọkachamara dị mma, saịtị ndị ahụ agaghịkwa enwe ọnụ ọgụgụ dị elu. Ogologo na-ejekwa ozi dị ka akụkụ nke njikarịcha saịtị.
Ihe ọzọ dị mkpa nke ndị ahịa chọrọ iburu n'obi bụ ụlọ njikọ . Ọ bụ usoro nke ijide n'aka na e nwere hyperlinks zuru ezu site na weebụsaịtị ndị ọzọ na-ezo aka na ọdịnaya na saịtị a. Nchọgharị ọchụchọ na-achọ njikọ n'etiti saịtị. Ha nwere ike iji njikọ na otu n'ime ụzọ abụọ. Njikọ ha na-ahụ na saịtị ahụ na-enyere ha aka ịchọta ibe weebụ ọhụrụ yana otu ụdị ọdịnaya maka isiokwu ahụ ma ọ bụ kpebie otú e si ebipụta ibe na ibe. Otú ọ dị, inwe ezigbo njikọ dị ike.
Ndị na-ere ahịa agaghị eleghara ike nke mgbasa ozi ọha na eze mgbe ọ bịara SEO. Dị ka ọ na-aga maka akụkụ ndị ọzọ niile nke SEO, karịsịa njikọ, ihe ndị dị mma mgbe ị na-ekere òkè na mgbasa ozi ọha na eze na-elekwasị anya. Otú ọ dị, ịkekọrịta sara mbara bụkwa uru. Ogwu mgbasa ozi na-enyere aka aka n'icheta ya dika o na-ekwu okwu nye otutu ndi mmadu nwere ike iche. Ndị nwe saịtị ga-ewulite netwọk nke ha nwere ike ịmepụta iji gbasaa ma kesaa ọdịnaya ha, na akara ahụ emesị.